अष्ट्रेलियामा भारी वर्षापछि बाढीको कहर, सिड्नीका ३२ हजार मानिस घर छाड्न बाध्य
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा सिड्नी र वरपर बस्ने ३२,००० भन्दा बढी मानिसहरू बाढीका कारण आफ्नो घर छोड्ने खतरामा छन्। विस्तृतमा
अष्ट्रेलियामा कर्मचारीको चरम अभाव !
अस्ट्रेलियाको डार्विनमा नेपाली संस्कृति एवम् परिकार महोत्सव सम्पन्न
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको डार्विनमा नेपाली संस्कृति एवम् परिकार महोत्सव–२०१९ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । नेपालीहरुको छाता संगठन (एनएएनटी)द्वारा आयोजित कार्यक्रम डार्विनको मुटुआटर फ्रन्टमा भएको थियो । नेपाली संस्कृतिक झाँकिद्वारा कार्यक्रमको शुरुवात भएको थियो, भने त्यस्तै जिवित कुमारी, नाखेनाच, कुमारी नाच, ढुङ्गेधारा, नेपाली भान्छा, नेपाल झल्कने कलावस्तु र नेपाली खानाका विभिन्न परिकारहरु बनाएका थिए ।
अष्ट्रेलिया विशेषः शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्दा कतै भिषा नै रद्द हुने त होइन ?
शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्दा कतै भिषा नै रद्द हुने त होइन ?
अष्ट्रेलिया कार दुर्घटनाः दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु अघि यसरी रमाउँदै खिचेका थिए भिडियो
सिड्नी । सिड्नीबाट हिँउ खेल्न स्नो माउण्टेन हिडेका दुई नेपाली विद्यार्थीको सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गएको छ ।
अष्ट्रेलिया विशेषः बुवाआमाले १० वर्षसम्मको अस्थायी भिषा पाउँछन्, यस्तो छ नियम
अष्ट्रेलियन नागरिक वा पीआर भिषा भएकाहरूका विदेशमा रहेका बुबाआमालाई लक्षित गरी बढीमा १० वर्षसम्मको अस्थायी भिषाको घोषणा गरेको छ । यी भिषा नोभेम्बर महिनाबाट लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । भिषाका केही विशेषता यस्ता छन्:
अष्ट्रेलियामा भएको कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा स्याङ्जाका दुई विद्यार्थी
सिड्नी । स्याङ्जा जिल्लाका दुई विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा भएको कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । शनिबार राति क्यानबेरा नजिकै भएको कार दुर्घटनामा स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका १० का समिक्षा सुवेदी र गल्याङ नगरपालिका ६ का गोपाल भण्डारीको मृत्यु भएको हो ।
अष्ट्रेलिया विशेषः सडक दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएमा कस्तो क्षतिपूर्ति पाइन्छ ?
सडक दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएमा कस्तो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अष्ट्रेलियाको कानुनमा समेटिएको छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यो लेखमा अष्ट्रेलियाको एनएसडब्लु राज्यको कानुनमा भएको दुर्घटना सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा कार दुर्घटना, घटनास्थलमै दुई नेपालीको मृत्यु तीन जना घाइते
सिड्नी । अष्टेलियामा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई नेपालीलृ ज्यान गुमाएका छन् । आइतबार बिहान सिड्नीबाट स्नो माउन्टेनतर्फ गइरहेको कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने तीन जना घाइते भएका छन् ।
यो अंकमा घरेलु हिंसा र त्यसले निम्त्याउने कानुनी झमेला सम्बन्धी विषय समेटिएको छ । यो लेख अष्ट्रेलियाको एनएसडब्लु राज्यको कानुनसँग सान्दर्भिक छ ।
अष्ट्रेलिया विशेषः ब्राण्ड न्यू घर किन्दा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
ब्राण्ड न्यू घर किन्दा आफ्नो रोजाईको डिजाइन अनुसार घर किन्न पाइन्छ । बाल्कोनी राख्ने कि नराख्ने, कस्तो खालको ल्याण्ड–स्केपिङ गर्ने, रुमका साइज कति ठूलो
पर्थ सम्मेलनः चीन र अष्ट्रलियाका नेताहरूबीच व्यापारको भविष्यबारे छलफल
सिड्नी । अष्ट्रेलिया र चीनका उदाउँदा करिब ८० नेताहरूबीच अष्ट्रेलियाको पश्चिमी शहर पर्थमा व्यापार तथा लगानीको भविष्यका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।